Misaora Ny Fanjakana Ottoman Amin’io Taco Izay Haninao io · Global Voices teny Malagasy
Misaora Ny Fanjakana Ottoman Amin'io Taco Izay Haninao io
Voadika ny 22 Mey 2015 7:58 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Italiano, Nederlands, Español, Deutsch, Ελληνικά, Català, English
Tacos al pastor ao amin'ny Toeram-pisakafoana Meksikana Carmela ao Beaumont, any Texas. Sary : Randy Edwards/CC BY-NC-ND 2.0
Ity lahatsoratra sy tatitry ny fampielezampeo ity izay nataon'i Deena Prichep sy Daniel Estrin ho an'ny Le Monde tamin'ny niandohany dia nivoaka tao amin'ny PRI.org ny 7 May 2015, ary averina havoaka eto ho toy ny ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty.
Ao amin'ny Supermercado ao Meksika any Portland, Oregon, no ahitanao kisoa hatsatsika, asiana sakay sy tongolo, hosorana menaka sy zavamanitra. Andidio kely izany ka ataovy ao anaty tortilla dia hahazo taco al pastor ianao, sakafo nentin-paharazana Meksikana eny an'arabe.
Seho mitovitovy amin'izay ihany manerana izao tontolo izao ny any Jerosalema. Ao amin'ny toeram-pisakafoana “voalavaka amin'ny rindrina” Al Waary , misy fitonòna hena omby mijidina mihodina eo akaikin'ny lelafo, asiana vinaingitra somary marikivy. Anasilao kely izany dia ataovy ao anaty pita, dia hahazo shawarma ianao – hena nentin-paharazana eny an'arabe any amin'ny Faritra Afovoany Atsinanana.
Raha mieritreritra ianao fa mety misy hifandraisany ireo sakafo tsara ireo, marina ny anao. Noho izany pehantsika hotetezina ireo sakafo an'arabe mba hamaliana izany, manomboka any Jerosalema.
“Mahaliana dia mahaliana tokoa ny shawarma,” hoy Ali Qleibo, palestiniana manampahaizana momba ny olombelona, eo am-pipetrahana akaikin'ny tono hena shawarma ao Al Waary. Ny niandohan'ny teny shawarma dia avy amin'ny teny tiorka çevirme, izay midika hoe “mihodina”.
Ali Qleibo, Palestiniana manampahaizana momba ny olombelona, eo anoloan'ny fivarotana shawarma ao Al Waary ao Jerosalema. Sary : Daniel Estrin. Navoaka miaraka amin'ny fanomezan-dàlan'ny PRI
Mazava loatra fa mety hahita karazany maro amin'ny shawarma ianao any amin'ny toerana rehetra any amin'ny Faritra Afovoany Atsinanana izay nanjakan'ny Ottoman fahiny.“
” Kebab döner no iantsoan'ny Tiorka azy ; gyro no iantsoan'ny Grika azy ; kas no iantsoan'ny Irakiana azy”, hoy Qleibo. “Izany dia mampiseho aminao ny dindo mieli-patrana napetraky ny Fanjakana Ottoman, satria mihinana shawarma daholo ny olon'ny Fanjakana Ottoman na dia samihafa aza ny anarana iantsoany azy.
Mazava ho azy fa tsy nijanona tany daholo ny vahoakan'ny Fanjakana Ottoman. Manakaiky ny 36.000 ny olona lasa nankany Meksika teo anelanelan'ny faran'ny taonjato faha 19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha 20 nandritry ny fanjakana Ottoman.
“Tonga avy any Egypta lavitra any ny olona. Nahita olona sasany avy any Iraka aho, hoy i Theresa Alfaro-Velcamp, mpampianatra tantara ao amin'ny Oniversitem-panjakana Sonoma izay manaraka akaiky ny fifindramonina avy any amin'ny Faritra Afovoany Atsinanana mankany Meksika. “Avy any Atsinanana ny ankamaroany, araky ny fiantsoana azy tamin'izany fotoana izany, izay i Libanona sy i Syria amin'izao fotoana izao.”
Nandeha nohon'ny antony mahazatra ny mpifindra monina : nitady hirika ara-toekarena, niala amin'ny raharaha miaramila ary nandositra ny herisetra ara-pivavahana. Ary rehefa tonga izy ireo, nentiny niaraka taminy ny sakafony. “Tany amin'ny taona 1930, nisy toeram-pisakafoana izay nandroso shawarma,” hoy Jeffrey Pilcher, mpahay tantara ary nanoratra ny boky “Planet Taco.”
“Sandwich” shawarma ao Jerosalema. Soloy hena ondry ny hena kisoa, ary soloy pita ny tortilla, dia ahazo sakafo nentim-paharazana meksikana ianao, ny Taco al Pastor. Sary : Daniel Estrin. Navoaka miaraka amin'ny fahazahoan-dalana nomen'ny PRI
Dia niova ny fomba fahandroan-tsakafo : “Nandritry ny taona 1960, ny ankizy Meksikana teraka avy amin'ireo mpifindra monina libane ireo … dia nanomboka nanokatra ny toeram-pisakafoana azy manokana, ary nanomboka namorona karazan-tsakafo nampivadiana,” hoy Pilcher.
“Nahazo ny haitao avy amin'ireo toeram-pisakafoanana libane niainany mandra-pahalehibe izy ireo, ny fitonòna hena mijidina – nefa ny hena kisoa no ampiasainy ho solon'ny hena ondry,” hoy Pilcher. “Alonany ao anaty saosy misy sakay mena, izay manome azy ny loko miavaka, ahandroiny ary arosony ka antsoiny hoe taco al pastor.”
Na ny teny “al pastor” izay midika hoe “amin'ny fomban'ny mpiandry ondry” aza dia fiaikena ny karazana niandohan'ny sakafo avy amin'ny hena ondry ao amin'ny Faritra Afovoany Atsinanana.
Rehefa niroborobo ny toekarena tao Meksika taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, nifindra avy amin'ny tanàna kely nankany amin'ny tanàn-dehibe ny taco al pastor ary tonga tany Etazonia no niafaràny.
Nanampy i Pilcher, mpanoratra tantara momba ny taco, fa na dia nafarana vao haingana avy any amin'ny Faritra Afovoany Atsinanana aza io sakafo io, tsy midika izany fa tsy meksikana io sakafo io. “Tsy zavatra nitranga tamin'ny fotoanan'ny Azteka sy Maya fahiny daholo akory ny kalitao niandohana,” hoy izy. “Averina foronina foana isaky ny andian-taranaka mifandimby izany dikany izany ao Meksika.”
Na izany aza, na hena ondry na hena kisoa, na tortilla na pita, Jerosalema na Potland, mitovy ihany ny fototra niandohany : Menaka sy afo, hanitra eran'ny tànana, sakafo vita haingana – ary tsiro netim-paharazana.